Qoorqoor oo tacsi kaliya u taga magaaladaa Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor oo tacsi kaliya u taga magaaladaa Gaalkacyo
Sooyaalka safarrada uu ku tagay Gaalkacy, Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, intooda badan, waxa ay ku biya shubteen tacsi iyo tiiraanyo uu kala qeyb galayay bulshada, taas oo dadka degaaanka iyo dowladdaba aan micno ugu fadhin.
GAAGKACYO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa shalay gaaray Magaalada Gaalgacyo ee xarunta Gobolka Mudug, si uu kaga qeyb galo tacsida iyo baroordiiqda loo sameynayo Allaha u naxariistee, marxuumiintii ku geeriyooday dagaalkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degaanka Wilsil oo hoos taga Hobyo billowgii todobaadkaan.
Sida ay sheegeyso xogta ku saabsan safarrada Qoorqoor uu ku tagay Gaalkacyo, tan iyo markii ay Madaaxtooyada Soomaaliya u boobtay kursiga Madaxweynaha Galmudug, waxay intooda badan salka ku hayeen ka qeyb gal tacsi iyo baroordiiq bulsho.
Dhamaadkii sanadkii hore, safarkii Qoorqoor ee Gaalkacyo, waxaa lagu xasuustaa qarixii qasaaraha badan geystay ee lagu laayay Saraakiishii Ciidanka Xoogga Dalka, qeyba Galmudug, kuwaas oo uu ku jiray Allaha u naxariistee Taliyihi Ciidanka qeybta 21-aad ee Xoogga Dalka, Janaraal Cabdicasiis Cabdullaahi (Qooje Dagaari).
MW Qoorqoor, wuxuu xilligaas Gaalkacyo kaga qeybgalay, aaskii iyo taacsidii, indhihii bulshadaa ee la laayay, waase la yaab in uusan wax talaabo ah qaadin, xitaaa ma jiro baaritaan arrinkaas ka xariira oo maamulkiisu sameeyaay oo bulshaada loo soo bandhigay.
Bishii May ee na-weydaaratay, mar kale Qoorqoor, wuxuu tagay Gaalkacyo, si uu kaga qeyb galo aaska Allaha u naxariistee Shiikh Cali Axmed Faarax (Shiikh Cali Dheere), oo ciidamada Amniga dileen, ilaa hadda ma jiro baaritaan rasmi ah maamulka Qoorqoor soo bandhigay oo la xariira dilkii Aabihii Waxbarashada Gobalka Mudug.
Ugu danbayn MW Qoorqoor, wuxuu shalay gaaray xarunta Gobolka Mudug, si uu kaga qeyb galo tacsida gobolka taalla, ee ka dhalatay duullaankii gaaadmada ahaa ee 27-kii bishii la soo dhaafay ka dhacay Wilsil oo ku taalla koofurta Gobolka.
Shacabka Mudug ayay layaab ku noqotay safarrada Qoorqoor, ee kaliya salka ku haya, tacsida iyo tiiraanyada, oo waliba baaritaan iyo ka daba tag aan midna lahayn.
Waxaa la filayaa inuu dhawaan gaaro degaanka Wisil ee dhibaaatadu ka dhacday, halkaas oo bulshada degaanku sheegayaan in booqasho aysan muhiim u ahayn ee difaac iyo duullaan lagu qaado Al-Shabaabka go’doomiyay ay u baahan yihiin.
Shacaaka ayaa intiisa badan ka qaxay magaalada, waxaana xilli kasta loo toog-hayaa, in mar kale uu degaanka ka dhaco dagaal u dhaceeya Kooxda Al-Shabaab oo dhul ballaasi ka wadda Mudug iyo dhalinyaro is aruursaday oo u is taagay difaaca degaanka.